Nepal Deep | ‘काका-भतिज’ द्वन्दले कास्की सभापतिमा प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै, शुक्रराज विरोधी एक ठाउँमा !
‘काका-भतिज’ द्वन्दले कास्की सभापतिमा प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै, शुक्रराज विरोधी एक ठाउँमा !
पोखरा। नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला समिति चयनको लागि हुन गइरहेको निर्वाचनको रौनक कास्कीमा बढेको छ। अरु समयमा भन्दा यसपाली जिल्ला सभापतिको लागि कास्कीमा प्रतिस्पर्धा अत्यन्तै रोमान्चक हुने देखिएको छ।
त्यसको एक कारण हो, कास्की कांग्रेसमा अहिलेसम्म एकक्षत्र प्रभाव जमाइ राखेका नेता शुक्रराज शर्मा र उनलाई सुरुवाती दिन देखि नै सहयोग गरिरहेका नेता पोषनाथ शर्मा बीचको द्वन्द। नातामा काका-भतिज रहेका शुक्रराज र पोषनाथको सम्बन्ध बिग्रिएसँगै यस अधिवेशनले कास्कीमा लामो समय देखि हाबी शुक्रराज समूहको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्नेछ।
अघिल्लो महाधिवेशनमा पोषनाथलाई सभापतिबाट ‘ब्याक’ गराएका शुक्रराज आफै चुनाव लडेर सभापतिमा हारेका थिए। आफू स्वाभाविक रुपमा सभापतिको उम्मेदवार हुनपर्नेमा कुनै बेलाका शक्तिशाली केन्द्रीय सदस्य शुक्रराज आफैँ अघिसरे पछि पोषनाथ पछि हटेका थिए। त्यतिबेला जिल्ला सभापतिबाहेक अरु पदमा उठेर कनिस्ठ नेताहरुको भाग नखोस्ने भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सिमित हुन खोजेका पोषनाथलाई शुक्रराजको नै दबाबमा अन्तिममा क्षेत्रीय सभापतिमा मनोनयन दर्ता गर्न लगाइएको स्रोतको दाबी छ।
त्यसपछि भएको स्थानीय निकाय निर्वाचन, प्रदेश सभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पोषनाथलाई कतै पनि शुक्रराजले अघि बढाएनन्। कांग्रेसका एक केन्द्रिय सदस्यका अनुसार पोषनाथले शुक्रराजको लागि प्रदेश सभाको टिकट पनि त्यागेका थिए। ‘काठमाडौँमा उनलाई प्रदेश सभाको टिकट अफर गर्दा शुक्रराज काका प्रतिनिधिसभाको आकांक्षी हुनुहुन्छ। घात गर्न सक्दिन भने। सायद अहिले सभापतिमा सहयोग गर्छन भन्ने आश गरे कि? त्यो थाहा भएन। तर टिकट दिँदा पनि लिएनन्,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने।
तर अहिले तिनै शुक्रराजले पोषनाथलाई बाइपास गरेर आइबहादुर गुरुङलाई सभापतिको रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। प्रदेश सभापतिमा आकांक्षी शुक्रराजले ‘गुरुङ भोट’ आफू तिर आकर्षित गर्न गुरुङलाई ‘बलिको बोका’ बनाउन लागेको चर्चा कास्की कांग्रेसवृतमा चल्न थालेको छ।
तर शुक्रराज पक्षीय नेताहरु त्यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरु पोषनाथलाई पटकपटक मौका दिइएको भन्दै अहिले सभापतिमा नलड्न आग्रह गर्दा टिम विरुद्ध नै लागेको आरोप लगाउछ्न्।
अर्कोतर्फ, अहिलेको स्थिति देख्दा सुरुवाती दिन देखि घरपरिवार बिर्सेर शुक्रराजको लागि पोषनाथले गरेको त्यागको अवमुल्यन भएको पोषनाथ निकट एक नेताले बताए। ‘काकाले के गर्न खोज्नु भएको हो थाहा भएन। तर पोषनाथ बिना काकाको कास्कीमा साम्राज्य कसरी बन्थ्यो र? त्यो किन बुझ्नुभएन। रामजाने। रामकै भक्त हुँ भन्नु हुन्छ। यस्तो अन्याय कसरी गर्नु होला थाहा छैन,’ उनले भने।
ती नेताका अनुसार यसपटक शुक्रराजले साथ नदिएपनि पोषनाथ सभापतिमा लड्ने बताए। ‘काकाले जीवनको उत्तरार्धमा गल्ती गर्नु भयो। यो लडाई बाहिरबाट हेर्नेलाई रोचक होला हामीलाई दुखान्त हो,’ उनले भने।
काका-भतिज द्वन्दले शक्तिशाली टिम फुट्ने स्थितिमा हुँदा शुक्रराज विरोधीहरुमा भने उत्साह देखिन्छ। प्रदेश सभापतिमा लड्ने तयारी गरेका शुक्रराज पोषनाथको अनुपस्थितिमा कमजोर हुनेछन्। यद्धपि उनलाई बहालवाला जिल्ला सभापति कृष्ण केसीको भने साथ रहने छ।
पूर्व सभापति यज्ञ बहादुर थापा र नेता देवराज चालिसेले पनि प्रदेश सभापतिमा ‘इन्ट्रेस्ट’ देखाइरहेका छन्। पोषनाथले शुक्रराज टिम विरुद्ध उठ्ने आँट गरे थापा र चालिसे उनलाई सहयोग गर्ने मुडमा छन्। अर्कोतर्फ कास्कीकै पुराना नेता तारानाथ रानाभाट र महादेव गुरुङ पनि उनको पक्षमा उभिने स्थिति बन्दै गएको स्रोतको दाबी छ। प्रदेश मन्त्रीहरु बिन्दु कुमार थापा र कुमार खड्काले पनि पोषनाथलाई सहयोगको आश्वासन दिएको बुझिएको छ।
जिल्ला सभापतिमा पोषनाथ बाहेक सरस्वती गुरुङ, किशोरदत्त बराल लगायतले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। काका-भतिजको टकरावले उनीहरुलाई फाइदा हुने स्थिति पनि बन्न सक्छ। सरस्वती यस अघि उपमेयरमा पराजित भएकी थिइन्। उनि सशक्त उम्मेदवारको रुपमा उदाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।